Jud Jud - WRSP
Ebube JUDE onye ukwu
Ọgwụgwụ nke narị afọ 1 TOA A mụrụ Judas Thaddeus na Galili.
27 OA A kpọgidere Jizọs n'osisi; mgbe ha rịgoro Jud na ndịozi ndị ọzọ malitere njem njem ala ọzọ ha.
28 OA Juda gwọrọ Eze Abgar nke Edessa, na-agbanwe ya na ọtụtụ ndị ọ na-achị.
50 OA Juda gara Nzukọ Apostolic na Jerusalem.
62 OA Juda laghachiri na Jerusalem site na izisa ozi ọma iji nyere aka na nhọpụta nke Simeon ka ọ bụrụ bishọp abụọ nke Jerusalem mgbe ọnwu nke mbụ gasịrị, nwanne ha nwoke James.
65 OA Juda gburu ndi mmadu na Bekee na Beirut, Lebanon.
Ogologo oge na-agafe agafe na St. Jud ji nwayọọ nwayọọ gbasaa.
1548 (Septemba 22) Pope Paul III nyeere ndị nile gara Saint Jude ohere ịbanye na ili ya n'ụbọchị Ọbịa, 28.
Ijere 20 nke narị afọ nke itoolu na Senti Jud mụbaara.
1960 (October 28) Strine Jude na Pakshikere, Karnataka, India bu onye bishọp nke Mangalore, Rt, malitere. Rev. Dr. Raymond D'mello.
2008 (November) Archdiocese nke Mexico nyere otu nkwupụta na-agọnahụ mmekọrịta nke Jud Jud na nchedo ndị omempụ na ndị isi ọjọọ.
Ọ bụ ezie na nkọwa banyere ndụ nke Jud Jud nọgidere na-amaghị, ndị na-akwado ya na-agba akaebe na ọ bụ otu n'ime ndị ozi iri na abụọ ahụ, otu n’ime ezigbo ndị na-eso ụzọ Kraịst. Akụkọ mgbe ochie kwuru na a mụrụ Saint Jude na ezinụlọ ndị Juu. Nna ya, bụ́ Cleophas, nwụrụ n'ihi okwukwe ya nke ịkpọsa mbilite n'ọnwụ Kraịst. Nne Judia, Mary nke Kiliopas, bụ nwa nwanne nne Meri, nne Jisọs. O guzo n’akụkụ ụkwụ obe n’oge a kpọgidere ya na Virgin Mary na Mary Magdalene na John 19:25. Na Matiu 27:56 na Mark 15:40 ya na Meri Magdalin na-ele ọnwụ Jizọs anya na ụmụ nwanyị ndị ọzọ. O nwere ike ịbụ na Jud sụrụ asụsụ Arameik na nke Grik, rụọkwa ọrụ ugbo. Ọ ga-abụkwa na ọ hà n’afọ ndụ Jizọs. Ọkọ akụkọ ihe mere eme nke Chọọchị Ndị Kraịst oge gboo, Saint Hegesippus, kwuru banyere nsonye nke ụmụ ụmụ abụọ nke Saint Jude n'ihe mere na narị afọ nke abụọ, yabụ onye nsọ lụrụ ma nwee opekata mpe otu nwa ("Life of St. Jude" nd).
A kwenyere na ya bụ Jud na nwanne ya ma ọ bụ nwa nwanne nne Jizọs. Saint Jud bụ nwanna nwanne Saint James nke Less, Simiọn, na Saint Joseph; ha niile bụ ndị na-eso ụzọ Jisọs iri na abụọ nke kacha nso nso ma kpọọ ha dị ka adelphoi Jizọs. Okwu Grik a sụgharịrị ịbụ “nwanne” pụtara n'ụzọ nkịtị. otu o sila dị, ndị ntụgharị na ndị ntụgharị atụpụtawo ọtụtụ nghọta nghọta nke "ụmụnna" n'ọnọdụ dịgasị iche. N'ime ugboro 343 ọ pụtara n'Agba Ọhụrụ Grik, adelphos a tụgharịrị iji kọwaa ogo dịgasị iche iche nke mmekọrịta, nke anụ ahụ na nke mmụọ. N’ebe ụfọdụ, a sụgharịrị okwu a ịbụ “onye otu okpukpe,” ọkachasị “Onye Kraịst ibe ya,” dị ka ọ dị n’Ọrụ 6: 3 na 1 Ndị Kọrịnt 5:11. Otú ọ dị, ojiji o ji Juda mee ihe na Matiu 13:55 na-agụ, “abụghị ụmụnne ya [adelphoi] Jems na Josef na Simiọn na Judas [Jud]? ” O yikarịrị ka ọ ga-akpọ aha ezinụlọ (Attridge 2006). N'ebe a, a kọwara "ụmụnne" ka ọ pụtara "ụmụnne okike," "ụmụ nwanne nna," na "nwanne nne." Ya mere, a nabatara ebe nile na Jud nwere mmekọrịta ezinụlọ ụfọdụ na Jizọs, ikekwe site n'ọbara, na ndị ọzọ so n'ezinụlọ ahụ keere òkè na ozioma ahụ. N'agbanyeghị otu Saint Jude si nwee njikọ na Jizọs, nwanne nna ma ọ bụ nwanne nwoke, njikọ chiri anya nke ndị senti na Kraịst gosipụtara na eserese, nke na-egosipụtakarị onye nsọ ihe oyiyi nke Kraịst n'aka ya, na-ejide ya n'obi ya mgbe niile.
Na Grik, aha a na-akpọ Ioudas bụ “Jud” na “Judas,” ha abụọ bụcha “Juda,’ otu n’ime ebo iri na abụọ nke Izrel nke mechara bụrụ Alaeze Ndịda n’oge ọchịchị ndị nkewa e kewara (922-722 TOA) ). Juda pụtara “otito dịrị Chineke” aha ndị bụ́ Jud na Judas sụgharịrị n'ụzọ dị ka “ekele,” “inye,” na "otuto." Na nsụgharị Agba Ọhụrụ Greek nke Matthew, a na-akpọ onye nsọ ahụ Lebbeus na Latin Vulgate dị ka Thaddeus. Ndị a na-agbakwunye na njedebe nke aha ya iji mee ka ọdịiche dị n'etiti ya na ndị ọzọ nwere otu aha. Aha nna Thaddeus pụtara “onye obi ike” ma ọ bụ “ịhụnanya.” N'ụzọ dị otú a, aha ya na-egosi omume ya dị ka ihe enyemaka nye ndị na-enweghị enyemaka. A kọọrọ na Kraịst kwuru na, “ọ ga-egosi onwe ya dịkarịrị njikere inye aka” na, dịka ndị na-eso ya si kwuo, okwu Kraịst emezuola n’ọgbọ niile ka ndị Katọlik kwesịrị ntụkwasị obi tụgharịrị nye Onye Nsọ n’oge mkpa (“National Shrine of St . Jude ”nd).
A na-eme mgbalị siri ike iji wepụ iche Jud Jud, onye a na-akpọ Jud na Judas, site n'aka Judas Iskarịọt, onyeozi chetara dị ka onye raara Kraịst nye. N'ihi ya, n'etiti aha ndị ọzọ, a na-akpọ ya "Saint Jude, ọ bụghị Iscarọt," "Saint Jude Thaddeus," "Jud, nwanne Jizọs," Jud nke James "ma ọ bụ nanị" Saint Jude the Apostle. " A pụrụ ịhụ ọdịiche a n'Oziọma Jọn nke na-akọ maka Nri Anyasị Ikpeazụ. Mgbe Jizọs gwasịrị ndịozi ya na ya ga-ahapụrụ ha ma laghachikwuru ndị obi ha ghere oghe n’ebe Ọ nọ, Saint Jude jụrụ ajụjụ. “Judas (ọ bụghị Iskarọt) wee sị ya, 'Onyenwe anyị, gịnị mere ị ga-eji kpughere onwe gị nye anyị, ọ bụghị nye ụwa?' Jizọs zara ya, sị, 'Ndị hụrụ m n'anya ga-edebe okwu m, Nna m ga-ahụkwa ha n'anya, anyị ga-abịakwutekwa ha ka anyị na ha biri' '(Jọn 14: 22-23).
Ihe omuma banyere ndu ozi ala ọzọ nke Jude Thaddeus edoghi anya; otu o sina dị, a sịrị na ọ rụrụ ọrụ dị ukwuu n'ịgbasa Iso followingzọ Kraịst na-eso agụụ na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. N'ikwusa ozi ọma ike, ọ chọrọ ka ndị mba ọzọ gbanwee. Ederede sitere na Nicephorus, Isidore, Fortunatus, na Martyrologies sitere na ụwa oge ochie na-ekwu na onye nsọ ahụ zisara ozi na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Mediterranean. Akụkọ akụkọ dị iche iche na-akọwa ya ka ya na Saint Simeon na Saint Bartholomew na-eme njem n’oge dị iche iche n’ala ochie, na-agbasa ozioma, ma ọ bụ “ozi ọma” (si Greek euaggelion) nke Jizọs Kraịst. Ẹdọhọ ke Jude ye Simeon ẹma ẹnam mme utịben̄kpọ, ẹkọk udọn̄ọ, ẹnyụn̄ ẹfọp mme mbiet ndem. Dị ka akụkọ si kwuo, ndị nsọ mere ka ndị mmụọ ọjọọ gbaa ọsọ ma mee ka ihe oyiyi nke arụsị daa. E nwere akụkọ mgbe ochie na-ekwu na Thaddeus na-akwado ozioma Ndị Kraịst site na Libya, site na Palestine, Mesopotamia, Parthia, na rue Armenia.
Ngwọta kachasị amara nke Jud bụ nke Eze Abgar nke Edessa na 29 OA. Dị ka akụkọ akụkọ si kwuo, eze zigara Jizọs ozi na-arịọ ka Ọ bịa gwọọ ya ekpenta ya. Mgbe Jisos kwuru na O nweghi ike ibia, ikekwe iji nwalee okwukwe nke eze, Abgar ziputara onye ogwu ka o weghachiri oyiyi nke Kraist, ka o wee leba anya na Ya. Mgbe ọ na-ele anya na ihu Kraịst, onye na-ese ihe juru ya anya ma nwee ike ịmepụta ọmarịcha ịma mma ọ hụrụ. Ya mere, mgbe Jisos ji ọmịiko kpalie ya, o were ihu ya kpuchie iru ya, n'ichebe onyinyo ya maka nkasi obi nke eze. Jisos nyere ndi mmadu aka ka ha weghachite ya na Edessa tinyere ozi na mmadu ga-abia ime ka aru ya di ike. Ihe oyiyi ahu bu eze nabatara ya ma jiri olile anya na-echere onye biara. Mgbe Kraist rigosịrị na 28 OA, Onyeozi Saint Tọmọs zipụrụ Jud Jud iji mezuo ozi ahụ. Jud gara Edessa wee gwọọ eze na ike nke Mmụọ Nsọ. N'ịbụ onye a gwọrọ site n'ọrịa ya, Eze Abgar na ọtụtụ n'ime ndị ọ gụrụ ghọrọ ndị na-eso Kraịst, ihe dị nsọ na-emetụ ya n'ahụ, na ụzọ Mmụọ Nsọ si kwaga n'ime Jud Jud iji gwọọ na iji kọwaa ozioma Kraịst. Ihe omuma nke Senti Jud n'egosiputa onye nenwe ihe oyiyi nke Chineke nke di nso n'obi ya ka o nebe ya n'olu. Ihe oyiyi onyinyo nke ihu Kraịst bụ ihe atụ nke ọdịdị dị ebube nke Ọkpara ahụ, ike ime mmụọ nke Mmụọ Nsọ, ọrụ izisa ozi ọma nke Jud, na mmekọrịta dị n'etiti onye nsọ na Onye Nzọpụta.
Mgbe ọnwu martyred nke James James, bishọp mbụ nke Jerusalem, Jud laghachiri Jerusalem iji nyere aka na nwanne Saint Saint Simeon dị ka bishọp ọhụrụ na 62 CE. O nwere ike ịbụ na oge a ka Thaddeus dere akwụkwọ ozi nke ọ bụla e dere na ya, Akwụkwọ Ozi Agba Ọhụrụ nke Jud, bụ onye a na-amaghị. Onye nsọ ahụ gara n'ihu njem njem ala ya mgbe ọ gachara nke ọma na nhoputa nke nwanne ya nke abụọ n'ọnọdụ nke bishọp nke Jerusalem. Ọdịbendị na-ekwu na ndị Juu na-ekpere arụsị na Parthia na-ata ahụhụ na Jud Jud. Ụfọdụ akụkọ ifo na-ekwu na ọ na-egbu ya ma na isi ya gbarisiri ike, ebe ndị ọzọ na-ekwu na ọ gbagburu akụ mgbe ọ nọ n'elu obe. Ọtụtụ akụkọ ntụrụndụ na-agbakwụnye isi nke ndịozi ozi mgbe ọ nwụsịrị. Oge ụfọdụ mgbe a nwụsịrị ya, a na-eburu ihe fọdụrụ na Saint ahụ gaa Rom ma dinara na nzuzo n'okpuru St. Basilica na Vatican City.
Ọ bụ ezie na o yiri ka a kwadoro ya na chọọchị oge mbụ, nsọpụrụ nke Saint Jud Thaddeus amaliteghị ruo mgbe oge ochie. N'ime oge nke ịda ogbenye na ọrịa dara, ndị tọgbọrọ n'efu na-agbakwu Chọọchị. Ndị ụkọchukwu ahụ bịara dị ala n'ihu ihe ùgwù ahụ, ma yie ka ndị nsọ karị, ndị ụkọchukwu. Ndị Katọlik, na-achọsi ike maka nduzi ime mmụọ na nnapụta, tụgharịrị uche ha n'ebe ndịozi nọ, na-ekpesi ekpere ike ka ha rịọchite ọnụ ha n'ekpere maka enyemaka Chineke. N'ihi mkpakọrịta ya na Judas Iskarịọt na enweghị Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ ihe mmụta Akwụkwọ Nsọ nye ọtụtụ ndị Katọlik, ndị mmadụ chigharịkwuuru ndị ozi ndị ọzọ nile tupu ha abịa Jud. O nwere ike ịbụ n'ihi nke a mere Jud ji ghọọ onye nsọ ka ọ gbanwee mgbe akụ ndị ọzọ gwụrụ, mgbe ihe yiri ka ọ bụ enweghị olileanya.
Na nkenke papal na September 22, 1548, Pope Paul III nyeere ndị niile ga-aga Suda Jud Thaddeus n'ili ya n'ụbọchị Ọbịa, 28. Dika ihe nnochi anya nke ndi mmadu, ndi mmadu kwenyesiri ike na ndi mmadu bu ndi mmadu n'enye ha ntaramahuhu. Inye onyinye dị otú ahụ dị nnọọ obere. Ya mere, ntinye nke Thaddeus ka a na-enye ohere maka ibi ndụ na-enweghị mmehie na enweghị nchegbu; mgbe mmadu nwesiri, mmadu puru igabiga ntaramahuhu na purgatori ma bia kwa n'iru Chineke.
N'oge obi nkoropụ, nraranye nye Jud Jud abụwo nnukwu. Agha na akụ na ụba iwe nke ụwa oge a nwere akụkọ ihe mere eme
mere ka ọtụtụ ndị Katọlik chebara Thaddeus anya na-atụ anya inweta enyemaka. Mgbe ọtụtụ narị afọ nke ofufe nkwụsị, Saint Jud malitere ịnata ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-akwado ya na narị afọ nke iri abụọ. Ikwusa ozi ọma na Jud Jud siri ike n'etiti World War I (1914-1918), Great Depression (1929-1939), na Agha Ụwa nke Abụọ (1939-1945). N'agbanyegh i mmalite mmalite ya, nraranye nye Jud Jud aghọwo ndi mara oke ama n'etiti ndi Katolik. Ọdịiche a na-ewu ewu nke ndị senti na-emetụta nke Virgin Mary.
N'ọgbọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ mpaghara dị n'ebe ndịda ụwa enwewo nsogbu ọgba aghara na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ha abụọ apụtawo ìhè na Mexico. Ndị Mexico na-arịwanye elu na-arịwanye elu site na ọdachi ndị na-emere onwe ha, ọrịa na ọrịa, njedebe nke ihe onwunwe, ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ịdaba na njem na nsogbu akụ na ụba. Ọnụ ọgụgụ ndị omempụ anọwo na-arị elu ngwa ngwa ruo ọtụtụ iri afọ. Ahịa ọgwụ ọjọọ a kapịrị ọnụ wetara mmerụ ahụ na ọnwụ ọnwụ site na igbu ọchụ, ịtọrọ mmadụ, na ime ihe ike ndị òtù. Ma ọchịchị Mexico, bụ nke na-anabataghị na enweghị mmezi iji kwado ọnọdụ ọdachi nke ndị ogbenye, na Chọọchị Roman Katọlik, nke na-akwadoghị ọrụ ndị nkụzi nke ntọhapụ nke ndị ọrụ mgbasa ozi dị n'etiti ya, enyela aka na enweghị ike ime n'etiti ndị Mexican dara ogbenye . N'otu oge ahụ, ndị na-ekere òkè na ahịa ọgwụ, ndị bụ ndị uwe ojii nke ndị Mexico na ndị agha, ọtụtụ ụlọ ọrụ gọọmentị na-ahụ maka ọgwụ ọjọọ na United States, na ndị omempụ asọmpi, na-edugakwa ndụ dị ize ndụ na ime ihe ike. Ya mere, ikekwe ma eleghị anya, ma rịọ arịrịọ maka Saint Jude, onye nsọ nke ọnọdụ ndị siri ike, bụrụ ụzọ nke ịmepụta ikike nke ịchịkwa. Ọ bụ ezie na Jud Jud na-asọpụrụ gafee ọtụtụ ndị Katọlik dị na Meksiko, ntinye aka na-esikarị ike na ndị ogbenye na-enweghị nsogbu. N'ihi ya, ọbụna Virgin nke Guadalupe, onye nlekọta na-elekọta ndị Mexico, anaghị enweta nsọpụrụ dị ukwuu n'obodo ya dị ka San Judas.
Ndị mmadụ na-ahụ maka ndị Katọlik, bụ ndị a na-ahụ maka Chọọchị Roman Katọlik, ghọtara na ha ga-ebuli n'eluigwe elu site na omume ọma ha ma ọ bụ ezi ihe nlereanya. A na-eji nkwanye ùgwù na-emeso ha ihe ma na-abụ ihe nlereanya nke ibi ndụ nke Kraịst na dịka ndị na-etiti n'etiti ụmụ mmadụ na Chineke. Dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, "ihe kachasị nsọpụrụ nke ndị nsọ bụ ebube Chineke na idobe mmadụ nsọ site n'ime ka ndụ ya kwekọọ n'ụzọ kwekọrọ n'uche Chineke nakwa site n'iṅomi àgwà ọma nke ndị bụbu ndị na-eso ụzọ Onyenwe anyị" ( 2001 Vatican: 2,6,212). Nke a pụtara na ọ bụ Chineke ka a na-eme ma na-ekpe ekpere maka nsọpụrụ ofufe ma na-asọpụrụ Chineke n'ụzọ doro anya. Ka o sina dị, dị ka ndị nsọ ndị ọzọ nwere ike, St. Jud, na-ekere òkè dị ukwuu n'ememe okpukpe nke ọtụtụ ndị Roman Katọlik na-eme kwa ụbọchị. Otu ihe dị iche iche nke nsọpụrụ nke St. Jud, bụ na a nabatara ya dịka ndị nsọ dị na Mexico site n'ụdị dịgasị iche iche, ndị na-adịghị ahụkebe. Ụdị nkwanye ùgwù dị otú ahụ na-ajụ ndị ndú Roman Katọlik.
Nye ndị na-efe ofufe, Senti Jud abụghị naanị onye na-arịọchite anya mmadụ n'etiti Chineke na Chineke; ọ bụ enyi na-ahụ n'anya, onye na-eche nche, na onye na-eduzi, onye na-anọgide n'akụkụ otu onye, ​​karịsịa mgbe ọ nọ n'ọnọdụ kachasị njọ mgbe mmadụ nọ n'ọchịchị nke mmetụta uche na nke mmụọ. Kraist bu Onye nzoputa nke madu nile; Jud Jud bụ onye nchebe nke ndị nọ ná mkpa. Ndị na-agbata ọsọ na-aga na Jud Jud maka inye aka na nsogbu dị iche iche, dị ka ọgwụ ọjọọ na ịṅụ mmanya na-aba n'anya, nsogbu mmekọrịta onwe onye, ​​ọrụ na nsogbu ego, nsogbu ahụike na ahụike, na nsogbu onwe onye kwa ụbọchị. Oge ọ bụla ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-eche na nkwado dị mkpa, ha nwere ike ichigharị na ndị senti ma nọgide na ndụ na echiche ọhụrụ nke olileanya na nchekwa.
A maara Jud Jud dịka onye na-agbachitere ịdị ọcha; ọ na-enyere aka iji jide ma ọ bụ nwetaghachi omume ọma. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi njirimara ya
na Akwụkwọ Ozi nke Jud, nke na-ekwu megide omume rụrụ arụ, karịsịa ndị metụtara mmekọahụ. N'oge ahụ, a dọrọ ịdọ aka ná ntị ndị a n'ihe banyere ememe arụsị. Ọ kpọrọ maka ịdị ọcha na okwukwe, omume, na omume n'oge ozizi ụgha na iche echiche na omume na-emegide Chọọchị.
Saint Jude bụkwa onye nchebe nke ụlọ ọgwụ, karịsịa ụlọ ọgwụ ụmụaka. Mkpakọrịta a na ụlọ ọgwụ nwere ike ịbụ n'ihi ọrụ ọgwụgwọ ya na ụwa oge ochie, ọkachasị ọgwụgwọ nke King Abgar na Edessa, yana nkwado ya dị ka onye nsọ maka ihe na-agaghị ekwe omume. N'ihi nke a, a na-arara ụlọ ọgwụ ụmụaka nye ndị senti. Judelọ Ọgwụ Nchọpụta Saintmụaka nke Saint Jude nwere ike ịbụ ụlọ akwụkwọ ama ama ama ama ama ama aha ya na onye nsọ na United States.
Ọnọdụ Thaddeus dị ka onye nchebe nke ịdị ọcha na ịdị ọcha na-ezo aka n'aha onye nsọ ahụ, bụ́ Juda, “ekele dịrị Chineke.” Mgbe alaeze ebe ndịda nke Juda dara na Templelọ Nsọ ahụ na 586 TOA, a manyere ndị Juu ibi n'ala ọzọ na Babilọn. N'ịbụ ndị na-enweghịzi ihe nnọchianya nke ọgbụgba ndụ ha na Chineke, bụ́ Ala Nkwa ahụ, ọtụtụ ndị Hibru chere na a gbahapụrụ ha ma malite inwe obi abụọ banyere okwukwe ha. Ajụjụ ndị metụtara ịdị ọcha, ofufe, na Iwu ahụ malitere ebe a na-enweghị azịza ha. Na nzaghachi nye azịza nke ndị mmadụ n'otu n'otu na obodo dị iche iche, ọtụtụ hụrụ mkpa ọ dị ime ka okwukwe nke ịjụ okwukwe na adịghị ọcha dị ọcha. Ha kwusara mkpa ọ dị ịlaghachi n'Iwu ahụ ma dị ọcha ma n'okwukwe ma n'omume. Dị ka ndị Hibru, ndị a tụbara n'ime ụwa a na-amaghị ama ma manye ịmalite ọzọ, bụrụ abụ abụ, na-achọ nkasi obi na nnapụta, ndị na-eso ụzọ nke Saint Jude na-ekpe ekpere maka nduzi nke onye nsọ na ịrịọchitere arịrịọ n'oge oge na-adịghị mma na ndụ ha. Dị nnọọ ka ndị òtù Juda dara ada kwadoro mkpa ịdị ọcha na ezi okwukwe na omume, Saint Jude guzo dị ka onye na-agbachitere ịdị ọcha, okwukwe, na omume.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị omempụ, karịsịa ndị na-etinye aka na ọgwụ ọjọọ, maara na iji San Judas iconography echebe onwe ha megide ndị mmanye iwu na ndị ọzọ (McCoy 2012; Valdemar 2010). A hụrụ ihe oyiyi Thaddeus dị ka ihe nnọchianya nke iguzosi ike n'ihe na ike. Ya mere ọ bụ onye nnọchiteanya nke echiche ndị dị mkpa dị na òtù ndị omempụ na ndị omempụ. Iguzosi ike n'ihe nye otu onye n'ile ndị iro na ịnọgide na-enwe mmetụta nke ịchịkwa ike na ọnọdụ ndị ọzọ na-enweghị ike ịchịkwa ndụ bụ ihe dị mkpa maka ụdị ndụ ndị dị otú ahụ. San Judas Tadeo na-etinye echiche ndị a n'anya ndị na-efe ofufe, ikekwe site na Akwụkwọ Ozi nke Jud maka oku nrubeisi n'okpuru Kraịst na ngosipụta nke ike nke mmụọ site na Mmụọ Nsọ na njem ozi ala ọzọ ya.
Ọktoba 28 bụ ụbọchị emume nke Saint Jude na Churchka Roman Katọlik. Na Chọọchị Ọtọdọks nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ, ụbọchị kwekọrọ na ya bụ June 19. N'ụbọchị a, a na-ekpe ekpere maka onye nsọ bụ onye na-asọpụrụ, na-eme ememe Mass na aha onye nsọ, na enwere ike ịgụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ pụrụ iche. Ndị na-eso ụzọ na-atụgharị uche na ndụ na nkuzi nke Jud Thaddeus n'oge ụbọchị mmemme ya ma na-egosipụta ihe mmụta ha ga-amụta site n'aka onye nsọ ahụ iji meziwanye ndụ ime mmụọ ha. Agbanyeghị na ewepụtara ụbọchị ndị a maka ndị senti na kalenda Roman Katọlik, itinye uche na Saint Jude bụ ihe ama ama n'afọ niile. Ndi kwere ekwe na-echigharịkwuru ya kwa ụbọchị; ewu ewu ya na-agba nke nne Nwaanyị.
A na-esi na kandụl na ekpere na-enyere ndị nsọ aka. Ndị na-akwado ya nwere ike inye Mas onye nsọ ma ọ bụ mezuo triduum ma ọ bụ novena maka nsọpụrụ ya. A triduum bụ ụbọchị atọ nke edo edo ma ọ bụ ekpere; a novena bụ itoolu. Mgbe ịmechara trudum ma ọ bụ novena maka nsọpụrụ nke otu onye nsọ, ekpere ndị a raara nye onye na-anabata onye nsọ, yana Nna, Ọkpara, Mmụọ Nsọ, na Nne Mụrụ, na-ekwu okwu ma tụgharịa uche. Otu nwere ike ịnata ịrịọ arịrịọ site n'aka ndị nsọ site n'iji Eucharist ma ọ bụ site n'ịmecha ọrụ ndị ọzọ jupụtara n'okwukwe n'ime ma ọ bụ n'èzí nke Chọọchị maka nsọpụrụ nke ndị senti. Ọrụ ndị dị otú a gụnyere ọrụ ebere, ọrụ ndị na-arụ ọrụ n'ime Chọọchị, na ọrụ ebere.
A na-etinyewo ebe obibi nsọ na Jud Jud gburugburu ụwa. Ha na-eje ozi dị ka ebe obibi njem na ebe maka akwụkwọ ozi na akwụkwọ ndị ọzọ, ma ọ bụ akwụkwọ ozi ekele maka ndị senti. A na-edebekwa Katọlik Katọlik mgbe nile na ihe ndị pụrụ iche a na-etinye na Juda, tinyere ihe ngosi pụrụ iche ma ọ bụ ememe. A pụrụ ịchọta onye nsọ na Saint Basilica, Vatican City; Rheims, France; na Toulouse, France.
Nkọwapụta nke Saint Jud na-egosipụtakarị onye senti na uwe na-acha akwụkwọ ndụ na-acha ọcha na nke ọcha nke Akwụkwọ Nsọ. Ọ na-ejide onyinyo ọlaedo nke Kraịst agbụ
n'olu ya na obi ya. Ọkụ ọkụ gburugburu isi nke onye nsọ na-eje ozi dị ka ihe nnọchianya nke ịdị nsọ ya. N'otu aka, ọ na-ejide ya ma ọ bụ onye na-azụ atụrụ. The halberd bụ ihe atụ nke onye senti martyred; a na-ede ya dịka ngwá ọrụ ọnwụ ya n'ọtụtụ ọdịnala. Onye ọrụ ọzụzụ atụrụ ahụ bụ ihe atụ nke Akwụkwọ ozi nke ịdọ aka ná ntị Jud megide ndị nkụzi na ndụmọdụ ụgha na-agbaso ụzọ Kraịst n'ụzọ omume na n'ụzọ ime mmụọ na nkasi obi ya maka ndị nwere olileanya. Ọ na-ezo aka na onye nsọ na-ebute ụzọ ahụ tọgbọrọ n'efu na nke na-ezighị ezi n'ime ezi okwukwe na omume na olileanya nke olileanya. Ejikwa ire ọkụ kpuchie Judi na isi ya, na-anọchite anya ọnụnọ ya na ndịozi ndị ọzọ n'ụbọchị Pentikọst nke Kraist zigara mmụọ ndịozi ahụ dịka O kwere nkwa tupu Ya arịgoo. Dị ka a kọrọ na Ọrụ 2, ndịozi iri na abụọ ahụ gbakọtara maka ememme ndị Juu, ememe ụbọchị iri ise mgbe Ememe Ngabiga gasịrị, Mọ Nsọ wee dakwasị ha. Ha juputara na Mm] Ns] wee malite ikwu okwu n'as s dŽ icheiche, Mm] Ns] anaeme ha baptism. Onyeozi Apostle Peter kọwaara ìgwè mmadụ ahụ gbagwoju anya na Mmụọ Nsọ na-enye ha ike ma kwusaa banyere Kraịst na atụmatụ Chineke nke nzọpụta site n'aka Ya. N'ịbụ onye ụjọ site na mmụọ nkwusa ya, ìgwè mmadụ ahụ chegharịrị, ndịozi ahụ mekwara ndị 3,000 baptizim n'ụbọchị nke Pentikọst, ụbọchị iri ise mgbe a kpọlitesịrị Kraịst.
Na Mexico oge a, a na-asọpụrụ San Judas karịsịa na ụbọchị 28th nke ọnwa ọ bụla. Ndị na-eme ihe na-eweta kandụl, iconography, na ekpere na ekele. Ọtụtụ ihe oyiyi nke San Judas ma ọ bụ ihe oyiyi ndị ọzọ nke onye nsọ ahụ ka a gọzie ya na n'ụzọ ime mmụọ. October 28 bụ oge ememe pụrụ iche. Ọtụtụ ndị na-efe ofufe na-abata n'abalị ahụ tupu ha echee ememe na ngọzi ndị a ga-enweta. A na-agba egwú ịgba egwu n'ihu ihe oyiyi Saint Jud na ndị na-efe ofufe na-egwuri egwu mgbe ha na-eji ejiji na omenala ụmụ amaala. Ọbụna ụfọdụ na-achọ ime ka àgwà ya dị mma site n'inye ejiji dịka San Judas, na-enye akwa uwe na-acha ọcha nke na-eji uwe na-acha uhie uhie na-agbanye n'ubu aka nri. Ndị omenala Latin America ejirila egwu mee ihe iji gosipụta nrara ha raara onwe ha nye San Judas Tadeo, n'ụdị mariachi. Ọbụna ndị ọzọ na-agbapụ egwu na egwú hip-hop na nsọpụrụ nke Jud Jud. Mi Santo San Judas Tadeo site na Cano na Blunt, San Judas Rap site Cinco / Nueve, na Pa San Judas Tadeo dị n'etiti ntinye nke oge a.
A na-ahụ Saint Jude dị ka onye senti na Roman Katọlik Katọlik, Anglịkan Church, Eastern Katọlik Chọọchị, Eastern Orthodox Church, na Coptic Christian Church. Mmetụta ya zuru ụwa ọnụ. E nwere ụlọ arụsị ndị raara nye ya na Brazil, Puerto Rico, United States, United Kingdom, India, Sri Lanka, Philippines, na Australia. Dịka ọmụmaatụ, nke Fada James Tort guzobere nke ndị ozi ala ọzọ nke Claretian na 1929 iji gbalite mmụọ nke ndị ụka ya, National Shrine nke Saint Jude na-ewetara ndị na-akwado ya na akwụkwọ ozi ha site n'akụkụ ụwa niile na South Side nke Chicago. Ugboro ise n'afọ, Solemn Novenas na Saint Jude na-ewere ọnọdụ na Shrine, na-adọta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-akwado ya. Shlọ arụsị na ntinye uche nke onye nsọ ghọrọ ihe ewu ewu n'oge ọgba aghara nke oke ndagide (1929-1939) na Agha Worldwa nke Abụọ (1939-1945) ("National Shrine of St. Jude" nd). Zọ ọkara gafee ụwa, Rt. Rev. Dr. Raymond D'mello, Bishọp nke Magalore, guzobere Judelọ Nsọ St. Jude na Pakshikere, Karnataka na Southwest India na October 28, 1960. E wuru ya n'ugwu zoro ezo na oke ohia, ebe mbu a na-enweta ya naanị site na ụkwụ. N'agbanyeghị mgbasi ike a chọrọ iji ruo Shrine, ọ dọtara ọtụtụ ndị njem ala obere obere ụlọ ("“ka St. Jude Thaddeus Church" 2010).
E nwere ọtụtụ ihe gbasara obodo St. Jude na asọpụrụ ya: njirimara na ọnọdụ okpukpe ya, akwụkwọ edemede nke Jud, na ịkwado St. Jude dịka onye nlekọta na-elekọta ụlọ site na nchụpụ na ndị omempụ nke ndị Mexico.
Nihi na ozi banyere ndu na ozi nke Jud Thaddeus di nkpa, otutu ihe ekwere banyere ya sitere na omenaala na akuko. N'ihi ya, akụkọ banyere ndụ St. Jude dị ka nke edoghị anya ma ọ bụ dị iche na nkọwa. Jude Thaddeus bụkwa onye aka dị ala n'oge ụfọdụ akụkọ ihe mere eme n'ihi aha ya na Judas Iskarịọt. Ruo ọtụtụ ọgbọ, a kpọrọ ya naanị Thaddeus ma ọ bụ Lebbeus mgbe a kpọtụrụ ya aha. Inwe obi ike maka Saint Jude dị obere ruo mgbe Middle Ages, na ntinye amaliteghị ịba ụba ruo narị afọ nke iri abụọ. N'ikpeazụ, a na-aghọtahie ọnọdụ ya na Chọọchị Roman Katọlik mgbe ụfọdụ. Ebe ọ bụ na nsọpụrụ dị ka onye nsọ malitere tupu e guzobe usoro iwu nke narị afọ nke iri na abụọ, Thaddeus enweghị mgbe a na-ahazi ya dịka onye nsọ na ọdịnala Roman Katọlik. Tupu e tinye usoro ịgba akwụkwọ, otuto a na-ewu ewu yana nnabata ndị ụkọchukwu zuru oke iji kpọsaa onye senti.
E nwere arụmụka banyere ma Jud Judi Thaddeus dere ma ọ bụ na ọ bụghị akwụkwọ Jud. Ọ bụ ezie na onye edemede ahụ na-egosipụta
ya onwe ya na akwukwo ozi akwukwo akwukwo dika Judas, ohu nke Kraist na nwanne Jemes, ekwenyewo na onye ozo puru ide ya. Judas bụ aha a na-ahụkarị n'oge nile nke Akwụkwọ Nsọ, karịsịa na usoro ndị Juu nke sitere n'aka ndị Juu. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'oge gara aga ka mmadụ kwuo na ọ bụ onye ọzọ ka e dere ede iji nye ikike ha (pseudepigraphy). N'okwu ndị dị otú ahụ, onye edemede mbụ ga-ede ihe n'ụdị nke onye edemede ahụ na-akọwa ihe, na-anabatakarị ozizi ha site na ihe odide mbụ. Ndị mmadụ n'otu n'otu na obodo ha nwere ike ịchọta echiche ha site na olu ndị ọzọ a na-akwanyere ùgwù. E nwere ihe atụ ndị ọzọ nke Akwụkwọ Nsọ. Dịka ọmụmaatụ, nke mkpụrụ akwụkwọ iri na anọ nke Agba Ọhụrụ nke a na-akpọ Pọl, ọ bụ nanị asaa ka a na-ewere dị ka Pauline, isii na-ese okwu ma na-akọwa dị ka Deutero-Pauline, ma a na-ajụ otu dịka Pọline n'ezie. N'agbanyeghị arụmụka ndị a, nchọpụta egosiwo na ọ ga-ekwe omume na Jud Thaddeus bụrụ onye mbụ dere Akwụkwọ Ozi nke Jud. Ya mere, akwụkwọ ozi a nwere ike ịbụ otu n'ime edemede Ndị Kraịst oge ochie site n'aka ndị Juu na Ndị Kraịst nke narị afọ mbụ Palestine nwere ikike.
O doro anya na akụkụ kachasị esemokwu nke asọpụrụ nke St. Judi bụ ọganihu a na-adịbeghị anya na ntinye nke ndị na-ere ọgwụ na Mexico, ndị omempụ, na ndị ntorobịa a na-emewanye emepe. Ndị òtù a na-ekpe ekpere mgbe niile na Saint Jud ma na-egosipụta iconography nke ndị nsọ iji chebe onwe ha na ngwá ahịa ha site n'aka ndị na-agba ọsọ na ndị mmanye iwu (Leem 2001). Ebe ndị ọzọ gụnyere ihe oyiyi nke ndị nsọ n'ọtụtụ ụdị na ụdị na kandụl ndị na-eme mkpọtụ bụ ebe nkịtị. A na-ahụkwa onyogho ndị nsọ ahụ na dashbob, windo, ọla, akwa, na egbugbu. Ihe atụ juru eju. N’ọnwa Ọgọst, 2004, ndị agha Mexico wakporo ụlọ dị na Mexico City nke ndị na-azụ ahịa ọgwụ ọjọọ na-arụ dị ka ụlọ nyocha nyocha ọgwụ. Achọpụtara ọtụtụ amulets dị iche iche nke Saint Jude tinyere amulet na Santa Muerte, mmanya, kọmputa, na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ (Freese 2013). Na Jenụwarị, 2006 na Nuevo Laredo, Mexico n'akụkụ ụlọ arụsị nke Saint Jude, e gburu ụmụ nwoke atọ, tinye ozu ha n'ime gwongworo, ma gwongworo ahụ ọkụ dị ka ịdọ aka na ntị site n'aka otu ndị ọrụ ọgwụ ọjọọ, onye nsọ ha bụ St. Jude , onye ọzọ ("Nuevo Laredo Gunmen" 2006). Na Machị 16, 2012, ndị uwe ojii steeti kpaliri otu onye ọkwọ ụgbọala n'ihe a kọwara dị ka ebe a na-akwụsịkarị ịzụ ahịa n'akụkụ Moriarty, New Mexico na Interstate 40. Mgbe onye ọkwọ ụgbọ ahụ mere ihe na-enyo enyo, ndị uwe ojii nyochara n'ihu. Otu nkịta a zụrụ azụ n'ịchọpụta ọgwụ dugara ndị uwe ojii ahụ ruo wii wii wii wii wii nke juru na tankị 300. Etinyere n'etiti brik zoro ezo nke wii wii bụ kaadị ekpere nke Jude nke etinyebere ebe ahụ, enwere ike ichebe ya (Westervelt 2012; Sergio 2012).
Dịka onye na-eche nche maka ihe efu, Saint Jud na-eje ozi dịka onye nchebe na-enweghị ikpe na mmekọrịta enyi na enyi. Na nke a, Saint Jud nwere
na-abụkarị ndị na-ewu ewu na ihe omume mmezi na nkwado onwe onye. Na onye na-azụ atụrụ ya, ọ ga-ebute ya
ndị furu efu laghachiri n'ụzọ ziri ezi. Ụfọdụ ndị ụkọchukwu Katọlik nọ na Meksiko achọwo iji nsọpụrụ nke St. Jude dịka ụzọ na-eme ka omume dị mma na-anabata. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-eto eto na-etinye aka na mmebi iwu, karịsịa ahịa ọgwụ, na-apụta site na ịda ogbenye. N'ihe banyere nsọpụrụ nke ọma nke St. Jud n'etiti ndị Katọlik nkịtị, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ ndị ntorobịa etolitewo na-agagharị na Jud Jud maka enyemaka na ọnọdụ olileanya na olileanya. N'ime ememe ọnwa nke Jud Jud, ìgwè ndị na-eto eto nwere ike ịhụ na-etinye akwa ákwà ma ọ bụ anụ ahụ na-ekpo ọkụ n'èzí nke ụka ụfọdụ na-ada ogbenye. Tupu ha abanye n'ọnụ ụzọ na ihe oyiyi ndị Juu ha dị na Judi iji nyefe ndị nsọ ahụ nsọpụrụ, ndị ntorobịa a na-ebuli elu n'ọkụ, ikekwe ha ga-enweta ahụmịhe ime mmụọ na-akpali akpali karị na Chineke.
San Hipolito bụ ihe a na-ewu ewu karịsịa maka nlekọta nke Jud Jud nke ọ bụla n'ime ụfọdụ ndị isi obodo Mexico City kasị daa ogbenye ebe nwatakịrị na-enweghị nchegbu. Ọtụtụ ndị bịaranụ na-ekwupụta n'ihu ọha njikọ nke onwe ha na ime mpụ na iji ọgwụ ọjọọ eme ihe. Ha na-ebu ihe oyiyi Jud ha dị nsọ na chọọchị iji nye onye nsọ nsọ. Ha na-ebute ihe oyiyi iji mee ka ha gọzie ma nye ha ohere ịwụnye n'ụzọ ime mmụọ ka ikike nke Jud Jud nọgide na-enwe ike. Reverend Rene Perez nke San Hipolito Church na-atụ anya ịme ka ofufe a na-ewu ewu n'etiti ndị ntorobịa a na-echegbu onwe ha na omume ndị ọzọ. Papa Frederick Loos gara n'ihu. Ọ na - enyefe ndị na - ekpe ekpere na ìgwè nke ndị na - efe ofufe na - abụkarị ndị ntorobịa a na - emepe emepe na ọrụ Sanctolito na San Hipolito. Nna Loos na-eji ilu ndị a na-eme ihe atụ jupụtara ugbu a nke na-enyere ndị bịara ya aka ịkọrọ ozioma ahụ ndụ ha dị ugbu a. Ọ na-ahụ ihe dị otú ahụ dị mkpa iji jikọọ na nwata ahụ. Ka o tinyere okwu a, "Mgbe ị na-aga China, ị ga-asụ asụsụ Chinese. Ọ bụrụ na ị na-agwa ụmụaka okwu, ị na-eji egwu ha. Echeghị m na Chineke na-ewe iwe ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ha bịarukwuo ya nso "(Lacey 2010). Site n'ịgwa onye ntorobịa na slald slang, Reverend Loos na-achọ iji uru nke okwukwe adherents ama na-ekwu. N'agbanyeghị ọgwụ ọjọọ eji eme ihe n'èzí ọnụ ụzọ ụlọ ụka, ndị Reverends Loos na Perez na-ekwusi ike na ọrụ dị otú ahụ kwụsịrị n'ọnụ ụzọ. A na-achịkọta ọgwụ ndị na nchịkọta nchịkọta site n'aka ndị dị njikere ịhapụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ ha ka ha nwee ike ịbawanye ndụ nke mmụọ na nke dị ọcha. Reverend Loos na-etinyezi ọkụ na ọgwụ ndị a na-enye (Bronsnan na Szymaszek.) 2010. Omume a na-ejikọta mmụba nke ihe ọjọọ na ọkụ baptism nke ụbọchị Pentikọst. Site na nkwenkwe nke ozizi, a na-eme ka nwata ahụ dị ọcha site na ndụ ha gara aga ma kwadebe ibi ndụ na ozioma ahụ, dịka Senti Jud, bụ ndị ha ji aka ha, mere ka Mmụọ Nsọ dị ọcha, na-akwadebe ya maka njem ozi ala ọzọ ya.
Ọ bụ ezie na enwere ikpe dị otú a nke ịchọrọ ịgụnye ndị ntorobịa na-enweghị nsogbu na chọọchị ahụ, Chọọchị Roman Katọlik na-ajụkarị njikọ ọ bụla nke St. Jude na ichebe ọrụ mpụ dị ka mmetọ nke Onyeozi Saint, onye nchebe nke ịdị ọcha. Jude kwusara ozi nke ịgbaso ụzọ nke ozi-ọma na Akwụkwọ-ozi nke Jud na-akọwa mkpa ibi-ndụ dịka okwukwe ahụ dị. Ọzọkwa, n’ịbụ onye a zụlitere dị ka onye Juu nke narị afọ mbụ, Jud gaara ekwere n’omume nanị dị ka Iwu Hibru (Torah) na ụkpụrụ omume si dị, dị ka Jisọs kwere. Na Nọvemba, 2008, Archdiocese nke Mexico weputara nkwupụta na-agọnahụ mkpakọrịta Saint na nchedo ndị omekome. O dokwara anya: “Ọ dịghị ụzọ onye nsọ a ga-arịọchitere Chineke arịrịọ n’eluigwe maka ndị na-emegide iwu Kraịst, na-emebi iwu nke Thougbula mmadụ, Ezula ohi, Akwala iko” (“Archdiocese nke Mexico City 2013). Site na ọkwa Roman Katọlik, mgbe ahụ, echiche ọ bụla nke Saint Jude Thaddeus na-enye nchebe Chineke nye ndị omekome bụ ihe megidere ọrụ ozi ala ọzọ na nkuzi nke ndị nsọ. Ọtụtụ ndị Katọlik nkịtị nwere echiche gọọmentị. Iji maa atụ, mgbe a gbara gị ajụjụ ọnụ National Geographic banyere nsọpụrụ ofufe San Judas, ezigbo onye Katọlik na-akwado Saint Jude, Daniel Bucio, kwuru, sị, “Ha na-emetọ aha Onyenwe anyị na nke St. Jude kwa — ndị na-enweghị ihe ọ bụla gbasara nke a ahia ahia ihe "(Guillermoprieto 2010).
“Archdiocese nke Mexico City Okwu doro anya banyere St. Jude na 'St. Ọnwụ '. ” 2008. Katọlik News Agency, 3 November. Nweta site na Catholicnewsagency.com na 24 May 2013.
Attridge, Harold W., Wayne A. Meeks, na Jouette M. Bassler, eds. 2006. HarperCollins Study Bible: New Revised Standard Version na Apocryphal / Deuterocanonical Akwụkwọ. San Francisco: HarperOne.
Bronsnan, Greg na Jennifer Szymaszek. 2010. Streetwise Saint na-abata Mexico agha ọgwụ ọjọọ . The New York Times. Nweta site na http://www.nytimes.com/video/2010/07/07/world/americas/1247468383624/streetwise-saint-joins-mexico-drug-war.html na 24 May 2013.
Butler, Alban. 1866. Ndụ Ndị Nna, Ndị Nwụrụ n'Ihi, na Ndị Isi Ndị Nsọ. Mpịakọta 3. Dublin: J. Duffy.
Castellotto, Angello. 1964. Jud Jud - Inyeaka di nnukwu mkpa. Na nkwenye nke Ecclesiastical na Sydney: Society for Scholarly.
Freese, Kevin. nd “Otu Okpukpe Ọnwụ nke Ndị Ọgwụ Ọgwụ nke Onyeisi na Mpụ nke Mexico, Ndị omempụ, na ndị a chụpụrụ achụpụ.” Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọmụma Agha Ndị Agha Ọzọ. Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgbọ Ndị Agha Mba Ọzọ, Fort Leavenworth, Kansas. Nweta site na http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/Santa-Muerte/santa-muerte.htm on 24 May 2013.
Guillermoprieto, Alma. 2010. "Nsogbu Mmụọ." National Geographic Magazine, Mee. Nweta site na http://ngm.nationalgeographic.com/2010/05/mexico-saints/guillermoprieto-text on 24 May 2013 ..
Onwuchekwa, Marc. 2010. “Ikwu Asusu Chineke, Asusu Ndi Oji.” Mexico City Akwụkwọ akụkọ. July 7. Nweta site na http://www.nytimes.com/2010/07/08/world/americas/08mexico.html?_r=0 na 24 May 2013.
Leem, Susan. 2001. "Ndị dochie anya ndị nsọ nke ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ: Ajụjụ ọnụ nke US Marshal Robert Almonte." Na ịbụ, August 7. Nweta site na http://blog.onbeing.org/post/8596728718/the-substitute-saints-of-drug-trafficking-an-interview na 24 May 2013.
"Ndụ nke Saint Jude." nd Jude Thaddeus Ndụ & Biography. Nweta site na http://www.stjude.net/life_of_st_jude.htm na 24 May 2013.
"Matiu 13:55 Bible Lexicon." nd Akwụkwọ ọgụgụ Bible. Bible Suite site na Biblos. Nweta site na http://biblehub.com/matthew/13-55.htm na 24 May 2013.
McCoy, Juanita S. 2012 “Mara Ndị Senti Narco Gị.” Houston Press, September 12. Nweta site na http://www.houstonpress.com/2012-09-13/news/narco-saints/ na 24 May 2013.
“Shlọ arụsị mba nke St. Jude.” nd Shrineofstjude.claretians.org. Ụlọ Nsọ nke Obodo Senti Jud. Nweta site na http://shrineofstjude.claretians.org/site/PageServer?pagename=ssj_homepage na 24 May 2013.
"Nuevo Laredo Gunmen kpofuru Ohia na Ọgwụ Ike." 2006. Na Houston Chronicle. Nweta site na http://www.chron.com/news/nation-world/article/Nuevo-Laredo-gunmen-dump-bodies-in-drug-war-1853232.php na 24 May 2013.
“Saint Jude Thaddeus.” nd SaintsSQPNcom. Nweta site na http://saints.sqpn.com/?s=Jude+thaddeus&searchsubmit= na 24 Ka 2013.
Sergio, Chapa. 2012. "$ 233,000 na Marijuana Hụrụ n'ime San Judas Tadeo akpụ." Valley Central , January 24. Nweta site na http://www.valleycentral.com/news/story.aspx?id=711479#.UaH1T0qWeSo na 24 May 2013.
“St. Jude Thaddeus Church & Shrine, Pakshikere. ” 2010. Nweta site na http://www.stjudepakshikere.org/ na 24 May 2013.
Valdemar, Richard. 2010. "Ndị na-elekọta nchebe nke Mexico Underworld Drug." Iwu ndị uweojii Ndekota mmanye, June 1. Nweta site na http://www.policemag.com/blog/gangs/story/2010/06/patron-saints-of-the-mexican-drugs-underworld-part-one.aspx na 24 May 2013.
Vatican City, Ọgbakọ maka ofufe Chukwu na ịdọ aka na ntị nke Sakrament. “Akwụkwọ ndekọ banyere okpukpe kpọrọ okpukpe na akwụkwọ iwu. Kpụrụ na Ntuziaka. ” Nsọ Lee . 2001. Nweta site na http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_en.html na 24 May 2013.
Westervelt, Celina. 2012. "Nsọ dị nsọ agbatị Cartel ka ọgwụ ọjọọ na." KRQE News 13. Nweta site na http://www.krqe.com/dpp/news/crime/holy-saint-ties-cartel-to-drug-bust na 24 May 2013.